Umbhede owodwa kumaHostela ama-4 Bed Mixed Dorm Nap Manor
Ikamelo elihlanganyelwayo e-ihostela ibungazwe ngu-Kushal Sushil
· Amagumbi okugeza ahlanganyelwayo angu-6.5
I-Nap Manor Hostels itholakala eduze kwase-Mumbai International kanye ne-Domestic Airport, futhi ngaphansi kwemizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo usuka esiteshini sesitimela sendawo. Yini eyenza ihostela lethu libe yindawo ekhetheke kangaka? Siyaziqhenya ngokuqinisekisa ukuthi zonke izidingo zesivakashi ziyahlangatshezwa, okuhlanganisa amagumbi ahlanzekile navulekile azokuqinisekisa ukuthi ulala kahle ebusuku. Sinamanzi ashisayo amahora angu-24 ne-WiFi yamahhala engenamkhawulo kulo lonke ihostela.
Sengathi konke lokhu akunempilo ngokwanele ihostela nalo ligxile kakhulu ekuhlangenwe nakho kwezivakashi.
Okuwumlingo ngokuhlala ehostela ukuthi awazi ngempela ukuthi kuzokwenzekani. Ungase ufike uwedwa futhi ugcine usuhlangana nomngane wakho omusha omkhulu, uthando lwempilo yakho, noma ube nengxoxo ezoshintsha indlela obona ngayo izinto. Ngaphezu kwakho konke, lolu uhlobo lwendawo lapho izivakashi zazihlangana khona kusihlwa ukuze zijabulele iziphuzo ezimbalwa ndawonye, zidlale umdlalo futhi zikhulume ngokuvakasha nempilo. Abantu abahlala lapha abasoze bakhohlwa ukungenisa izihambi nokuzijabulisa.
4.88 ·40 okushiwo abanye
Sitholakala kalula eduze kwesikhumulo sezindiza futhi eduze komgwaqo omkhulu okwenza kube lula ukufinyelela ezindaweni ezishisayo njenge-Bandra, Juhu, Andheri kanye nemijondolo yaseDharavi. Izindawo zokudlela ezahlukahlukene, izindawo zokudla zasemgwaqweni, amathilomu nezindawo zobumnandi zisebangeni elifushane. Ihostela nalo lisendaweni ephephile.
Ibungazwe ngu-Kushal Sushil
Sinendawo yokwamukela izivakashi amahora angu-24 futhi sihlale sinomuntu ongakusiza lapho ufika futhi akusize uthole indlela eya ehostela. Siyajabula ukuphendula yonke imibuzo yesivakashi.
UKushal Sushil Ungumbungazi ovelele